Manavaka ny sakafonao amin'ny sary | Martech Zone
Alahady Oktobra 8, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Namako sy mpiara-miasa amiko iray, Pat Coyle, no nandefa teny fiderana tamiko momba ny bilaogiko. Nilaza izy fa ny iray amin'ireo zavatra tsikariny dia ny fandaniako fotoana hametrahana hatrany ny asa amin'ny sary sy ny atiny. Marina izany - zavatra ataoko isaky ny miditra. Ity ny teknika haingana sy mora nataoko:
Raha tsy manana sary na horonan-tsary ho an'ity lohahevitra ity aho dia mitady sombin-tsary misy solontena amin'ny Microsoft's Clipart toerana. Mikaroka amin'ny alàlan'ny Firefox aho mba hahafahako mitahiry gif ny sary ao amin'ny biraoko mba handefasana mora foana. Ny fampiasana IE dia ahafahanao mandalo ilay programa lozisialy Clip art miaraka amin'ny Office… izay mahasoa ihany raha tena te-hanitsy na hamerina hamerina hamerina hamerina ny haben'ny sary ianao.
Raha manana sary aho dia matetika no entiko mankany amin'ny Illustrator ary ezaho refesina mba hifanaraka amin'ny habaka ananako. Tsy tiako ny sary izay kely loatra ary maka habaka mitsangana… Matetika aho mampiasa align = ankavia na align = ankavanana hametrahana azy ireo amin'ny lafiny roa amin'ny fidirana mba tsy hanelingelina ny famakiana ny fidirana , nefa mbola manome loko vitsivitsy ihany.
Ity misy antony hafa antony anampiako clip art: RSS. Rehefa misoratra amin'ny sakafoko ny olon-tiako dia tiako ny manavaka ny tenako amin'ireo lisitr'ireo tsindrin-tsoratra an-tsoratra izay azony isan'andro. Hitako fa manara-maso ny lohateny sy ny atiny… fa matetika aho tsy maka sary hitako ao anaty fahana.
Ity misy santionany… iza amin'ireo no misarika ny sainao?
Tsy misy sary:
Miaraka amin'ny sary:
Manavaka ny sakafonao! Mampiasà sary! Tsy azoko fantarina na mitarika ho amin'ny fitomboan'ny mpamaky na ny fihazonana izany… fa ny zava-misy izay tsikaritr'i Pat dia nahatonga ahy hahatsapa ho toa izany.
Oct 12, 2006 amin'ny 3: 07 AM
Marina loatra. Raha mbola tazonina amin'ny farafaharatsiny farafaharatsiny - tiako ny RSS satria tiany ny dial-up-ko 😉